Mmepe oru ngo
Ụlọ akụ Power
Chaja ikuku ikuku na Desktọpụ
Kwuo chaja ikuku
Chaja ikuku ikuku ụgbọ ala
Chaja ikuku magnetik
Chaja ikuku ikuku dị ogologo
Ngwaahịa agbanyere MFi
Ngwaahịa agbanyere MFM
Ngwaahịa n'okpuru MFi kwadoro
Ngwaahịa dị n'okpuru akwụkwọ ikike MFM
Ngwaahịa dị n'okpuru MFi na MFM kwadoro
Nnwale & Ntụle ngwaahịa
Mmepe ngwaahịa ahaziri ahazi
Anyị na-enye ihe ngwọta omenala na mmepe maka ngwaahịa chaja ikuku, anyị nwere ike mezue ọrụ ndị dị otú ahụ n'ime ọnwa ole na ole-anyị maara na ọ dị mkpa inwe ike ịzaghachi usoro ahịa n'ime obere oge.
Ndị otu injinia na ndị na-emepụta ngwaahịa anyị dabara adaba na-aga n'ihu na-azụlite ma na-achọpụta azịza teknụzụ ọhụrụ ọhụrụ. Anyị na-etinye nnukwu mkpa na nka zuru oke ma na-eto eto ma na-ebuga igwe ọgbara ọhụrụ.
Ụfọdụ ngwaahịa ndị anyị rụpụtara ihe ngwọta bụ:
Ngwọta nchaji inductive
Chaja ikuku na desktọpụ
Chaja ikuku ụgbọ ala
Na ihe ngwọta ndị ọzọ (kpọmkwem na ngwaahịa chaja ikuku).
A na-emejuputa ogo ngwaahịa niile nke ọma dịka ihe achọrọ wee gafere ule na nleba anya ọtụtụ ọkwa.
Anyị na-ewere usoro ahụ site n'echiche ruo usoro ngwọta n'ime ọnwa ole na ole. N'ihi njikwa oru ngo a haziri ahazi, anyị nwekwara ike imezu arịrịọ gị ngwa ngwa.
Anyị na-anabata mgbanwe nke ndị ahịa anyị na ihe ndị ahịa chọrọ. Ijikọ ndị agha na Lantaisi dị ka onye mmekọ gị ga-enyere gị aka ịzaghachi ngwa ngwa maka mmepe ahịa.
Anyị ga-enwe obi ụtọ ijikwa ntozu na nkwado ma ọ bụ homologation n'ikwekọ n'ụkpụrụ OEM.
Site na echiche gaa na ngwọta maka mmepụta n'ime obere oge
Dịka onye na-eweta sistemụ, anyị na-elekọta usoro niile achọrọ. Usoro a na-amalite site na atụmatụ ọrụ, nsụgharị ngwaahịa 2D, ihe nrụpụta 3D, ma na-aga n'ihu na nkwenye na nkwenye dabere na njirisi OEM wee kwụsị na mmepụta usoro. A na-emecha usoro nyocha niile nke ọma na Lantaisi.
N'agbanyeghị ma ị nwere echiche nke ukwuu ma ọ bụ naanị echiche na-edoghị anya - atụmatụ ọrụ na anyị na-amalite site na nzuko zuru ezu tupu ọrụ ngo.
NJ (Nhazi ụlọ ọrụ)
Ndị injinia na-emepụta ngwaahịa na-eme nsụgharị ngwaahịa dabere na echiche ndị ahịa, gosi ndị ahịa echiche imewe, ma mee ka echiche gị were ọdịdị.
EVT (Nnwale nkwenye injinia)
Mgbe ịnakwere ọdịdị egosipụtara na nsụgharị ngwaahịa, anyị ga-eduzi nkwenye nhazi na ọkwa mbụ nke mmepụta ngwaahịa. Nke a gụnyere nnwale arụmọrụ yana nchekwa. N'ozuzu, RD (R&D) na-eduzi nkwenye zuru oke nke nlele ma na-eme ọtụtụ ule iji hụ na nchekwa ngwaahịa.
DVT (Nnwale nkwenye imewe)
Nnwale nkwenye chepụta bụ njikọ nnwale dị mkpa na mmepụta ngwaike. Anyị ga-eduzi ule ebu, ule arụmọrụ eletrọnịkị, na nyocha ọdịdị. Mgbe edozi nsogbu nke ihe nlele ahụ na ọkwa EVT, a na-anwale ọkwa na oge nke akara niile, na nyocha nchekwa, nke RD na DQA kwadoro (Design Quality Assurance). N'oge a, a na-emecha ngwaahịa ahụ, anyị ga-eduzi ihe ngosi 3D ma mepee ihe.
PVT (Nnwale nkwenye na-agba ọsọ)
Mgbe onye ahịa ahụ kwadoro na ọ dịghị nsogbu na nha na nhazi nke ihe nlereanya, anyị ga-eduzi mmepụta nnwale iji nyochaa mmezu nke ọrụ nke ngwaahịa ọhụrụ d ma na-eduzi nkwụsi ike na ule ntụkwasị obi. Nsonaazụ ule enweghị nsogbu, a ga-ezigara ndị ahịa ihe nlele ahụ.
Ọ bụrụ na enweghị nsogbu na sample, anyị mmepụta ngalaba nwere ike ịrụpụta uka mmepụta maka gị n'oge ọ bụla. Anyị nwere usoro ihe nrụnye zuru oke: njikwa njikwa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nyocha na akụrụngwa mmepe, akụrụngwa mmepụta, ụlọ nkwakọba ihe na njem. Ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ anyị ime ka ndị ahịa nwee nchegbu.